असारमा खेतमा राख्ने युरिया मलको राष्ट्रिय टेन्डर, खेतीमै निर्वाह गर्ने किसानलाई भदौमा पनि मल नपाएर हन्डर – Sulsule
असारमा खेतमा राख्ने युरिया मलको राष्ट्रिय टेन्डर, खेतीमै निर्वाह गर्ने किसानलाई भदौमा पनि मल नपाएर हन्डर
सुलसुले २०७७ भदौ १७ गते १७:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं भदौ १७
असारको महिनाभित्रै धानखेतमा राख्नु पर्ने युरिया मल भदौको अठार विस हुँदा समेत किसानले नपाउँदा गरिव र किसानको हितमा बनेको समाजबादी सरकारको मुखतिर हेरेर गरिव,किसानहरु सरकारप्रति औंला ठ्याइरहेका छन् ।
यतिवेला आएर बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वंगलादेशकी प्रधान मन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई टेलफोन वार्ता गरी दुइ देश बिच आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने सहमतिका कुरा गर्दै वंगलादेशसँग युरिया मल दिनको लागि हारगरहार गरेका छन् ।
विगतमा रासायनिक मल ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिलाई टेण्डर दिदै आएकोमा यस पाली भने दुई शक्तिशाली पार्टीका नजिकका ठेकेदारले टेण्डर पार्न सफल भएका छन् ।
नेकपा निकट शारदा अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र नेपाली काँग्रेस निकट हुमनाथ कोइरालाको होनिका मल्टिपल कम्पनिले प्रति टन क्रमश;२२०.२५ डलर र ३०९.९० डलरका दरमा ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने सर्तमा अरुको भन्दा सस्तो दरमा टेण्डर हुत्याउन सफल भएका थिए ।
उनीहरुले गत पुष,माघमा मल ल्याउछु भनेर भनेको थिए । भदौ २० मा त अन्तिम खेम ल्याउने सम्झौता भए पनि हाल सम्म किसानले मल खेतमा छर्न नपाएर भदौरे चर्को घाममा खेतको डिलमा बसेर मल नपाएर पहेलै भएका धानका बोट हेर्न बाध्य भएका छन् ।
उता ठेकेदार द्धय भने कानमा तेल हालेर मस्त निद्रामा निदाइरहेका छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेको र सस्तो भएपछि ल्याउने दाउमा रहेका छन् । हुन पनि उनीहरुलाई केको चिन्ता अधिकारीले सत्त्ताको र कोइरालाले प्रतिपक्षको गीत गाइदिए समाजवादी सरकारका जनताहरु त जे गर्ने गरुन ,के मतलव ।
अहिले देश कोरोनाले गर्दा तहसनहस भइरहेको अवस्था छ । शहर बजारमा बसेर उधेगधन्दा,ब्यापार,ब्याबशाय गर्नेहरु बिलाखाबन्धनमा परेर सरकारसँग हारगुहार मागिरहेको अवस्था छ । अहिले शहरमा बसेर ब्याबशाय गर्नेहरु पनि गाउँमै गएर कृषि पेशा गर्न शुरु गरेका छन् भने कोरोनाको मारमा परेका अरु पनि विकल्प खोज्दै गाउँमै गएर कृषि पेशा गर्ने सोंचाइमा छन् ।
सरकारले पनि रोजगारको मुख्य आधारको रुपमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर व्यावहारमा भने उतार्न सकेको अवस्था छैन । कमिसनखोरमा रमाउने ठेकेदारहरुलाई काखी च्यापेर सरकार र प्रतिपक्ष बसिरहेका आभास जनताले गरेका छन् होइन भने किन किसानका खेतमा अहिले सम्म मल पुग्न सकेन ?
अव धान फुल खेल्ने बेलामा किसानले मल छरेर केको फल खान पाउँछन र ? लगनपछिको पोतेको के काम । यस तर्फ सरकारले बेलैमा विचार पु-याउनु पर्छ । होइन भने समाजवादको नाम केवल नामको लागि मात्रै रहन्छ जहिले सम्म गरिव किसान,मजदुरका समस्या वुझिदैन ।
शहीद श्रेष्ठ र चन्दको सम्झना
नेपाल मोरिसस फुटबल: दुई मैत्रीपूर्ण फुटबलमा ९ नयाँ खेलाडी, कतिले…
पाँच सत्ता गठबन्धनको बैठक अपराह्न फेरि बस्ने